Headline Nepal | कस्तो बेला युवतीहरु अत्याधिक यौनसम्पर्क गर्न चाहान्छन् ?
कस्तो बेला युवतीहरु अत्याधिक यौनसम्पर्क गर्न चाहान्छन् ?
एजेन्सी - महिलाहरु कुन समयमा बढी कामुक सेक्सी देखिन्छन् भन्ने जिज्ञासा सबैमा हुनु सामान्य नै हो । यसै बिषयमा बेलायतमा गरिएको एक सर्वेक्षणले भने शनिबारको रात महिलाहरुमा सबैभन्दा बढी सेक्स चाहना हुनेगरेको पाईएको छ ।
बेलायतको हेल्थ एण्ड ब्युटी रिटेलर सुपर डगको अध्ययनअनुसार धेरै महिला सातामा एकदिन आफूलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्दैन । र शनिबारको रात महिलाहरुमा सबैभन्दा बढी सेक्स चाहना हुनेगरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
अध्ययनका अनुसारशनिवारका दिन महिला आफुलाई ‘सिडक्टिव फिल’ गराउन विभिन्न तरीका समेत अपनाउने गरेका छन् । उनीहरूले शनिवारको रातलाई विशेष बनाउन तातो पानीले नुहाउने, नयाँ कपडा लगाउने र पुश अप ब्रालगाउन मन पराउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
सोही रात उनीहरुले राम्रो हेयर स्टाइल र सेक्सी स्माइल बढी प्रयोग गर्ने गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । २ हजार जना महिलामा गरिएको सर्भेमा आधाभन्दा बढी महिलाले आफ्नो पार्टनरलाई प्रभावित पार्न सकियोस् भनी प्रफ्युम हल्का स्प्रे स्पेसल फिल गराउन प्रयोग गर्छन् जसले ।